Akụkọ - Ngwa ngwa dị iche iche na usoro mmepụta nke akpa nkwakọ ngwaahịa mmiri
Akpa Cheertainer n'ime igbe
Akpa mmiri nwere ike ịdaba
Jerry Can nwere ike imebi
Vidiyo ndị ọzọ
Ụdị dịgasị iche iche nke ngwa na mmepụta usoro nke akpa akpa mmiri mmiri
Nkọwapụta nke anyị mmiri mmiri akpa akpa sitere na 1L-20L na enwere ike ịhazi ya dị ka ihe ndị ahịa chọrọ iji gboo ihe dị iche iche chọrọ.
1. Ihe ọṅụṅụ, jam nkwakọ ngwaahịa
Enwere ike iji akpa akpa mmiri mmiri mee ihe na tapawa tomato, ihe ọṅụṅụ oroma, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ vaịn. Ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi dị iche iche na-etinye uche, nkwakọ ngwaahịa pulpy.
2. Nkwakọ nri mmiri mmiri
Enwere ike itinye akpa akpa mmiri mmiri na nkwakọ ngwaahịa ude, mmiri ara ehi, mmanụ oriri, soy sauce, mmanụ aṅụ.
3. Nkwakọ ngwaahịa mmanya
Enwere ike itinye akpa akpa mmiri mmiri na mmanya mkpụrụ osisi mmanya edo edo na nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ.
4. Nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa Chemical
Enwere ike itinye akpa akpa mmiri mmiri na nkwakọ ngwaahịa ndị na-ehicha ihe, ndị na-emepụta gumbo, mkpuchi, acid na-adịghị ike, ntọala na-adịghị ike, agba, ihe mgbakwunye dị iche iche, ngwaahịa ihe mgbakwunye. Na nkwakọ ngwaahịa kemịkalụ, ọ dịghị usoro ịgba ọgwụ mgbochi chọrọ.
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co., Ltd. A na-ejikarị ya na nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri nke mmanụ, ihe ọṅụṅụ, jam, ngwaahịa mmiri ara ehi, mmanya, ngwaahịa mmiri mmiri, ihe oriri soy, sugar starch, wdg.
Akpa ngwugwu mmiri mmiria na-ejikarị eme ihe na ndụ kwa ụbọchị na mmepụta mmepụta ihe. Usoro mmepụta nke akpa nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri na-ekewa n'ime ihe nkiri ịfụ, ịkpụ, akpa mkpuchi okpomọkụ, nkwakọ oghere na igba ogwu.
Ihe nkiri na-afụ: A na-emepe usoro nchacha ikuku n'ime ụlọ ọrụ ahụ ma na-eme ka ogbako na ndị na-arụ ọrụ na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ ebe a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-erute ọkọlọtọ setịpụrụ, a na-afụkwa ihe ndị dị ọcha polyethylene n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ a kapịrị ọnụ.
Ịcha: A na-egbutu ihe nkiri a na-efe efe n'ime tubular film cylinders nke nha dị iche iche dịka nha ndị ahịa chọrọ.
Mkpuchi ọkụ na ime akpa: A na-ekpuchi cylinder ihe nkiri ahụ site na igwe mkpuchi okpomọkụ.
Nkwakọ ngwaahịa Vacuum: Mgbe akara, a na-eme nkwakọ ngwaahịa oghere multi-layer dị ka ọnụ ọgụgụ akọwapụtara.
sterilization: A na-eji ụzarị gamma mee ka akpa ndị ahụ achịkọta ọnụ wee nweta ike ọmụmụ nke ngwaahịa ahụ.
Akpa akpa mmiri mmiri aghọwo ngwaahịa pụrụ iche na-adaberekwaghị na mmepụta nke ngwaahịa, ụdị ngwaahịa niile enweghị ike kewaa, ngwaahịa ndị a na-ejikarị eme ihe. Maka akpa akpa akpa mmiri, biko kpọọ anyị.
Oge nzipu: Sep-27-2021
KAIGUAN isi nkwakọ ngwaahịa bụ cheetainer (akpa vetikal n'ime igbe), ldpe cubitainer, akpa mmiri na-ada ada, obere mpịachi jerry na igwe na-ejuputa.
Njikọ bara uru
Nke 15, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China.
© Nwebiisinka - 2010-2022: Ikike niile echekwabara.